Bogga ugu weyn Barnaamijka Iskaashiga
Barnaamijka isku-xidhka ayaa fursad weyn kuu ah inaad lacag ku kasbato adoo iibinaya alaabooyinka soo-kabashada xogta soo-kabashada ee abaalmarinta naga helay. Waxaan soo dhaweyneynaa qof kasta, shaqsiyaadka, ganacsiyada yaryar ilaa joornaalada, bogagga, iyo dukaamada.
DataNumen barnaamijka kuxiran ayaa ugufiican. Sababta
Guddi sare, nidaamka boqolkiiba jilicsan.
Iib kasta oo aad soo saarto, waxaad kasbataa wax aan ka yarayn 20% wadarta tirada iibka. Komishanku wuu kordhayaa iyadoo kuxiran waxqabadkaaga! Qiyaasta iibka badan ee alaabteenna soo-kabashada xogta ayaa ah, inbadan oo boqolkiiba ah ayaa noqon doonta.
DataNumen alaabooyinka ayaa aad loo jecel yahay.
Taasi waa sababta aan kuugu siinayno dammaanad adag oo ah heerka iibka sarreeya. Anaga oo ah hogaamiyaha aduunka ee teknoolojiyada soo kabashada xogta, waxaan iibinay barnaamijkeena soo kabashada ee abaalmarinta ku guuleysta ee in kabadan 130 wadan. Macaamiishayadu waxay u dhexeeyaan kombiyuutar laylis ilaa la taliyayaal xirfadlayaal IT ah iyo bixiyeyaasha adeegga soo kabashada xogta, laga bilaabo ururada yar yar ilaa ganacsiyada waaweyn oo ay ku jiraan nasiib wanaag 500. Xaqiiqdii, kombiyuutar kasta oo adeegsada waxaa laga yaabaa inuu leeyahay shuruud suurtagal ah oo ku saabsan alaabtayada soo kabashada xogta.
Taageero macluumaad oo buuxda.
Ahaanshaha xulufadeena, waxaad heli kartaa macluumaad aad muhiim u ah oo waxtar leh:
sii deynta cusub,
iibsiga iyo soo dejinta saamiga (heerka beddelka) ee dhammaan alaabada,
falalka suuq geynta mustaqbalka iyo qiimo dhimista,
alaabtayada ugu iibsiga badan.
Si aan u suurta galno, waxaan fulinaa warar gaar ah postku biirista shirkadaha raacsan iyo taageerida qaybta xiriirinta ee xiran oo leh macluumaad badan oo suuq-geyn ah oo ku saabsan alaabtayada. Waxay kaa caawin doontaa inaad doorato badeecooyinka ugu fiican ee lagu iibiyo bartaada, hagaajinta suuqgeyntaada, iyo isbarbar dhig waxtarka iibka.
Xirmooyinka buuxa ee qalabka dallacaadda.
Dhammaan agabyada dallacaadda ee dhammaan badeecadaha (sida sharraxaadda, xayeysiinta iyo isgaarsiinta macneheedu waa, boorar, abaalmarinno, dib u eegis, fikradaha macaamiisha ugu fiican, wareysiga lala yeelanayo kuwa wax horumariya iyo waxyaabo kale oo badan) ayaa had iyo jeer loo heli karaa la-hawlgalayaashayada. Waqti badan ku lumin meysid markaad raadineyso banner ama sawir aad ubaahantahay goobta.
Ololayaasha xayeysiinta ee wada shaqeynta ah iyo falalka suuqgeynta.
Waxaan kula sii wadi karnaa ololeyaal xayeysiis wada shaqeyn ah. Waxaa jira qiimo qaas ah lammaanayaasha, iyo sidoo kale qiimo dhimis fara badan, iibka ciidaha, boostada tooska ah iyo waxyaabo kaloo badan. Waxaad had iyo jeer codsan kartaa inaad hesho qalabka xayeysiinta nooc kasta ha ahaadee. Waxa kale oo aad isku hallayn kartaa kororka boqolkiiba komishanka markaad diyaarinaysid wararka postgala, ololeyaasha xayeysiinta, iyo falalka suuqgeynta. Mararka qaarkood xitaa waxaan qayb ahaan maalgelino falalka noocaas ah. Fikrad ma haysaa? Nala soo xiriir!
Taageero deg deg ah ayaa had iyo jeer la heli karaa.
Wixii su'aalo ah, talo bixin ah iyo codsiyo ah ayaa la tixgelin doonaa waxaadna heli doontaa jawaab celin tayo sare leh waqtiga ugu yar ee suurtogalka ah. Fadlan, isticmaal foomka jawaab celintaada si aad u weydiiso su'aal kasta ama u sameyso codsi ku saabsan barnaamijkeenna ku xiran.
Ka dib markaad iska diiwaangeliso barnaamijkayaga isku-xidhka ah, waxaan kuu qoondeyn doonnaa aqoonsi gacansaar ah.
Aqoonsigan ku xiran, waxaad ku abuuri kartaa xiriir dalab gaar ah oo loogu talagalay mid ka mid ah alaabtayada. Haddii macmiilkaagu wax ku iibsado iyada oo loo marayo isku xidhka dalabkaas gaarka ah, ka dib waan ogaan doonnaa gudbintaada waxaanan ku siineynaa guddiga adiga.
Aqoonsigan ku xiran, waxaad sidoo kale ku abuuri kartaa xiriiriye gaar ah bog kasta oo ka tirsan boggayaga shirkadda. Haddii macmiilkaagu ku booqdo bogga shabakaddan adoo adeegsanaya xiriiriyehan gaarka ah, buskud ayaa lagu keydin doonaa kombiyuutarkiisa iyadoo ay ku kaydsan yihiin ID-gaaga ku xiran. Kadib, haddii macaamilku iibsado badeecadeena waqti dambe, cookie-ka waa la aqoonsan doonaa oo guddiga ayaa laguu xil saari doonaa. Kukigu wuxuu shaqeynayaa 6 bilood illaa iyo inta macaamilkaagu uu sameynayo go'aankiisa iibsashada 6 bilood gudahood tan iyo booqashadiisii ​​ugu horreysay ee boggeena, waxaad ka heli doontaa guddiga iibkiisa.
Hel starhadda daalay
Barnaamijkeena isku xidhka ah waxaa maamula MyCommerce.com iyo FastSpring.com, labaduba waa hogaamiyayaal aasaasay barnaamijyada iskuduwaha barnaamijyada. Waxaad dooran kartaa midkood sida aad doorbideyso. Barnaamijka gacansaarka waa mid aad u fudud. Ma jiraan wax qarsoon costs waana tahay free inaad saxiixdo.
Diiwaangeli Barnaamijka Iskuxirka MyCommerce.com
Isdiiwaangeli Barnaamijka Wadajirka ah ee FastSpring.com
Diiwaangelinta ka dib, waxaan kuu soo diri doonnaa emayl ay ku jiraan aqoonsigaaga ku xiran iyo tilmaamaha start si aad lacag u kasban karto isla markaaba!
Haddii aad horey u leedahay akoon gacansaar ah MyCommerce.com ama FastSpring.com, markaa fadlan gasho guddigaaga xakamaynta oo naga hel inaan ku biirno oo aantart. Aqoonsigeena iibiyaha waa 39118 on MyCommerce.com iyo datanumen on FastSpring.com.